युगसम्बाद साप्ताहिक - माओवादी, जातिवादी भएर ओरालो लाग्दैछ - महेश्वर शर्मा
Monday, 09.10.2012, 05:00pm (GMT+5.5)
केही समय अघि चिनिया उपमन्त्री आई पिङल् नेपाललाई जातीय विभाजनमा नजान दिएको सल्लाह एउटा असल मित्रले दिने सल्लाह थियो । त्यसअघि त्यस्तै सल्लाह लिएर नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य पनि चीन यात्राबाट फर्केका हुन् । नेपालमा जातीय राज्य विभाजन भएमा नराम्रो परिणाम निस्कने संकेत चीनले पाइसकेको हुनाले त्यो कूटनीतिक लवजको सही सल्लाह हामीले मानन् गर्नुपर्छ । भारतीय राजदूतले पनि भर्खरै विराटनगरमा बोल्दा नेपालमा जातीय संघ राज्य ठीक छैन भनेका छन् । उनीहरूले भने पनि या नभने पनि जातीय, भाषिक र धार्मिक विभाजनले उब्जाउने महामारी त भारत आसमको हालैको जातीय दंगाबाटै देखिएको छ । जातीय पक्षधरहरूका आँखा खोल्न त्यो पछिल्ले घटना नै पर्याप्त हुनुपर्ने हो ।
ऐभाँतीका विधावालाई ढोग्दा ‘मै जस्ती भएस्’ भन्ने खालको चिनीया सल्लाह होइन । दलाई लामाका बोकाहाले चीनमा ओलम्पिक खेल चलिरहेकै बेला सिन्जियाङमा नगण्य अल्पसंख्यकलाई उचालेर सानै भए पनि दंगा गराएको जस्तो नेपालमा पनि गराउन सक्छन् भन्ने आभास पाएर नै चीनले शिष्टतापूर्वक सल्लाह दिएर आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको छ । त्यसलाई यहाँका उपबुज्रुकहरूले कुन रुपमा लिन्छन्, हेर्न बाँकी नै छ । किनभने यिनीहरूले धेरै अनर्थ गरिसकेका छन् । तिनैमध्येका प्रमुख प्रचण्ड जालझेल गर्नमा पनि उत्तिकै प्रचण्ड छन् । उनले “जातीय पहिचान भने पनि सबै जातको उत्तिकै अधिकार हुन्छ” भनेर फेरि झुक्याउन खोजेका छन् । सबैको अधिकार बराबर छँदैछ भने फेरि किन जात विशेषका नाममा राज्य त दाहाल महोदय ? अब पनि यस्तै जाली र चटके कुरा गर्न छोड्नु भएन भने तपाईं आफैं तल झर्दै जानुहुन्छ । ख्याल गर्नोस् । तपाईको पार्टी अब माओवादी होइन, जातीवादी भएर ओरालो लागिसकेको छ– मधेशवादी जस्तै ।
केन्द्रलाई कमजोर पारेर नेपाल जस्तो देश धानिन्छ भनठान्नु गलत हुन्छ । बहुविध जातजाति र भाषाभाषी भएको मुलुकमा एउटा मालामा उन्ने तत्व हुनैपर्छ । त्यो भनेको सबैतिर समान दृष्टि पु¥याउनसक्ने सबल केन्द्र नै हो । यसको अर्थ जिल्लाहरूलाई यथास्थितिमा राख्ने नभै यथेष्ट अधिकार दिएर उठाउने हुनुपर्छ । नेताहरू जनतालाई यथार्थ जानकारी नगराई स्वार्थवश भुलाउन मात्रै खोजिरहेका छन् । दिल्लीले गराएको १२ बुँदे सम्झौतादेखि नै बेइमानीको क्रम चलिरहेको छ । हैन भने १२ बुँदेमा त निरंकुश राजतन्त्र मात्र नमान्ने भनिएको छ, राजतन्त्र नै मास्ने त भनिएको छैन नि । प्रजातन्त्र हो भने जे गर्छौ जनतालाई सोधेर गर, मनोमानी नगर भन्न त पाइएला नि । पुच्छर बनेर हिंडेका कांग्रेस–एमाले के भन्छन् कुन्नि ?
नेपाल थोरै जनसंख्या भएको सानो देश भए पनि विविध ऐश्वर्यले परिपूर्ण देश हो । यसलाई विगार्न धेरैथरि लागेका छन् । लागेर त क्यै गर्न सक्ने थिएनन् तर यहींका कुलंघार लेण्डुपहरू निस्कन थालेर पो वरवाद हुन थाल्यो । विहान मेचीबाट मोटर चढे बेलुकी महाकाली पुगिन्छ । विहान तराईबाट हिंडेबेलुका मुक्तिनाथ पुगिन्छ । भारत या चीन जस्तो विशाल र केन्द्रले दृष्टि नै पु¥याउन नसक्ने र आवश्यक पर्दा नियन्त्रण नै गर्न नसक्ने स्थिति त नेपालको छैन नि । त्यसैले अन्यत्र जस्तै नेपालमा पनि हुनुपर्छ भन्ने छैन । भारतीय राजदूत एकातिर संघीयता र संघ जस्ता शब्द भारतीय संविधानमा छैनन् भन्नुहुन्छ भने अर्कातिर नेपालका लागि संघ आवश्यक देख्नुहुन्छ, किन ? पछौटेपन हटाउनकै लागि संघ चाहिएको हो भने पाँच सातवटा संघ राज्यभन्दा त पचहत्तर जिल्लामा अधिकार विकेन्द्रित गर्नु ठूलो कुरा होइन र ? हामी आफ्नै देशको परिस्थिति किन हेर्दैनौं र अर्कैमा पछि दगुर्छौं ? आफूलाई यहाँ नेता सम्झनेले सोच्नुपर्यो ।
यहाँ प्रश्न छ– नेपाल एक सवल राष्ट्र रहिरहने कि टुक्रे राज्यहरूमा विभक्त हुने ? संघ भनेको टुक्रे राज्य बनाउनु हो भने राष्ट्र भनेको टुक्रे राज्यहरूलाई जोडेर एकत्वमा ल्याइएको सबल शक्ति हो । इतिहासले के भन्छ ? नेपाल राष्ट्र कसरी बन्यो ? धेरै टुक्रा जोडेर बनेको राष्ट्र होइन र नेपाल ? अब त्यसलाई फोर्यो भने बलियो हुन्छ कि फेरि टुक्रैटुक्रा ? टुक्रा हुनु बाहेक त अरु उपायै छैन अर्थात् यहाँ टुक्रे राज्यहरू बन्छन् । गाउँगाउँमा रजौटा खडा हुन्छन् । झगडा सुरु हुन्छ । यस्तो स्पष्ट कुरालाई पनि बटारेर जनतामा भ्रम फैलाएर संघीयताका नाममा राष्ट्रको सबल पक्षलाई ध्वस्त पार्न खोजिएको तर्फ कांग्रेस–एमाले स्पष्ट भएर अघिसर्न नसक्नुलाई जनताले दुर्भाग्य नै ठानेका छन् ।
संविधानसभा पुनःस्थापना गर्न सहमत नभए कांग्रेसलाई सरकार बनाउन नदिने भनेर प्रचण्डले धम्की दिएपछि कांग्रेसका एउटा कोटरीको होसै उडेजस्तो छ । प्रचण्ड पक्षमा नलागे खान नपाइने भो भनेर होला छोटो समयका लागि पुनःस्थापना गर्नसकिन्छ भन्न थालेका छन् । तर ‘शूची प्रवेशे मुशलः प्रवेशः’ भएर फेरि ‘ब्याक टु मंगलमान’ हुनसक्छ भन्ने सोचेका छैनन् । जनताले संविधान बनाउने सभा भनेर मतदान गरेको त भ्रम रहेछ । त्यो ६०१ जनाको हुल त ‘संविधान संशोधन सभा’पो रहेछ जसले चार वर्षमा पनि संविधान बनाउनुसट्टा अन्तरिम संविधानलाई ..... पटक संशोधन गरेर अन्त्यमा ‘आत्महन्ता सभा’ भयो । अब फेरि त्यही प्रेत सभालाई बुख्याचा बनाएर अनन्त राज गर्ने कुचेष्टा भैरहेको छ । अब त त्यो काम नयाँ संसदलाई दिनुपर्दछ ।
अब पनि मरेको संविधानसभाको अपुताली समेलेर सहमतिका नाममा अल्झिरहने होइन । पुनःस्थापन गर्ने भनेर समय खेर फाल्नु हुँदैन । के आधारमा पुनःस्थापना गर्ने ? मरेको संविधानसभा पुनःस्थापित हुन्छ भने राजतन्त्र नै किन पुनःस्थापन नहुने ? त्यसैले अब निरर्थक बहस बन्द गरेर बाटो खुलाउने होभने निम्न काम गर्दै जानुपर्छ–
(१) सर्वप्रथम गैरदलीय चुनावी सरकार गठन ।
(२) विशेषज्ञहरूको संविधान मस्यौदा समिति गठन ।
(३) संसद निर्वाचनको तयारी र निर्वाचित सरकारको निर्माण ।
(४) संसदबाट संविधानको स्वीकृति ।
सहमति–सहमति जपेर मात्रै हुँदैन, सहमति नै गर्ने हो भने उपर्युक्त बुँदाहरूमा सहमत भएर सबैले आआफ्नो जिम्माको काम समाल्नुपर्छ र दलहरू आफ्ना कार्यक्रम लिएर निर्वाचनमा जानुपर्छ । मन्त्री पदको शान देखाउँदै झण्डा हल्लाएर, गार्ड लिएर सलाम खाँदै सरकारी साधन सुविधाको दुरुपयोग गरेर चुनाव जित्ने सपना नदेखी जनतामा विश्वास गर्न सक्नुपर्दछ, नत्र प्रजातन्त्र र जनताको नाम लिनु नै व्यर्थ छ । सरकारमा हुनेले सम्पूर्ण साधन प्रयोग गर्ने र अरुले निःशस्त्र भएर चुनाव लड्नुपर्ने यो विभेद अब मेटाउनैपर्छ ।